Multivarka အတွက် casserole - ခေါက်ဆွဲ၏ချက်ပြုတ်နည်းများ, ဖက်ထုပ်, minced အသားနှင့်ငါး - အရသာချက်ပြုတ်နည်းများ casseroles စိမ်းလန်းစိုပြေတဲ့။ multivarka အတွက်ထောပတ်, ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အသား casserole ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Multivarka အတွက် casserole - ရိုးရှင်းပြီးမူရင်းဟင်းလျာများ၏အကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများ
multivarka အတွက်မဆို casserole - နေအိမ်အသစ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရယူထားသောမီနူးမျိုးစုံသို့မဟုတ်ညစာ၏အကြွင်းအကျန်ကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရရှိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဟင်းချက်မီးဖို၌ရိုးရာမုန့်ဖုတ်ထက်ပိုမြန်သည်နှင့်အရသာဟာဂန္ဟင်းလျာများယုတ်ညံ့သည်မဟုတ်။
multivarka အတွက် casserole ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ပဏာမပြင်ဆင်မှုထုတ်ကုန်များနှင့်အစိတ်အပိုင်းများ tab ကိုအပေါ်အခြေခံပြီး multivarka အတွက် casserole ဘို့မဆိုစာရွက်, ကြွင်းသောအရာစမတ် gadget ကသူ့ဟာသူစေမည့်အချိန်နှင့်မုန့်ဖုတ်အစီအစဉ်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အနည်းငယ်လှည့်ကွက် သိ. သင်မကြာခဏဤစက်ကိရိယာ၌ဤပန်းကန်ပြင်ဆင်မည်ပါလိမ့်မယ်။
casserole ရောင်နင်းမပါဘဲရယူ multivarka နှင့်အောက်ခြေကနေအညိုရောင်အတွက်ချက်ပြုတ်။ လျှောက်ထားတဲ့အခါမှာ, သင်အထက်သို့အစွန်း toasted ဘောဇဉ်ကိုဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
တစ်စာရွက်မဟုတ်ရင်ထောက်ပံ့ပေးလျှင်တစ်နာရီ 30 မိနစ်ခန့်၏ "မုန့်ဖုတ်" ၌တစ်ပန်းကန်ပြင်ဆင်နေသည်။
ဖက်တီးအစားအစာများ၏ထို့အပြင်မပါဘဲ multivarka ပြင်ဆင်ထားအတွက် casseroles အမှီ။ အလွယ်တကူ Pre-ပန်းကန်တစ်ဦးခေပျြမြားကို တင်. သာ. ကောင်း၏ပြုမူဆက်ဆံရ။
ဘယ်လို multivarka အတွက်ထောပတ် pudding ပြင်ဆင်ထားရန်?
multivarka ရိုးရှင်းတဲ့အတွက်ဒိန်ခဲ casseroles ၏ကြော်ပေမယ့်အဓိကထုတ်ကုန်၏ပြင်ဆင်မှုလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ထောပတ်ဂရုတစိုက် Blender မှတဆင့်ကိုချိုးဖျက်ရပါမည်, သင်အစေ့တစ်ဆန်ခါတစျဆငျ့ကိုကျော်သွားနိုင်ပါတယ်ကျန်ရစ်ဒါကြောင့်ပန်းကန်အထူးသဖြင့်နူးညံ့ထုတ်ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။ မကြာခဏ semolina အတွက်ဆက်ပြောသည်နေကြတယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကနှင့်မုန့်ညက်ကိုအစားထိုးနိုင်ပါတယ်။
9-18% ဒိန်ခဲ - 300 ဂရမ်;
ကြက်ဥ -4PCs; ။
သကြား - 50 ဂရမ်,
မုန့်ညက် -3tbsp ။ ဌ။
လယ်ယာရေနံ - 50 ဂရမ်,
ငှက်ပျောသီး - 1 pc ။
သကြား, ဆားနှင့် vanilla နှင့်အတူဥ, အမြှုပ်မှရိုက်တယ်။
ထောပတ် Blender နဲ့လာကြတယ်တစ်ဆန်ခါတဆင့်သုတ်။
"မုန့်ဖုတ်" 55 မိနစ်အပေါ်ကွတ်။
multivarka အတွက်ကရိုနီရောင် casserole - ဘောဇဉ်အိမ်ရဲ့အကြွင်းအကျန်ဖယ်ရှားပစ်ရရန်ပြီးပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်။ ဤသည်မုန့်ညက်အဆိုပါ lasagna ၏ထုံးစံနှင့်အိမ်တွင်စီစဉ်ပေးနိုင်ပါသည်နှင့်အခြေခံအဖြစ်အသုံးပြုကြောင်းမနေ့ကရဲ့ညစာသတိထားမိခဲ့ပါဘူး။ အဆိုပါပန်းကန်ငန်ယူနိုင်ရန်béchamelနှင့်ဒိန်ခဲဖြစ်စေလျက်, မည်သည့် stuffing နိုင်ပါတယ်ဖြည့်ပါ။
ခေါက်ဆွဲ - 300 ဂရမ်;
mince - 250 ဂရမ်;
ဒိန်ခဲ - 200 ဂရမ်;
ဆား, ငရုတ်ကောင်း, စမုန်ဖြူ,
မုန့်ညက် - 100 ဂရမ်;
မုန့် - 200 ml ကို;
nutmeg - တစ်ဦးဖြစ်တော့;
မုန့်အရောင်မှ bechamel browned မုန့်ညက်စေပါ။
ပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိုးဆော်သည်မုန့်ကိုငါသွန်းလောင်း။ ဆား, ငရုတ်ကောင်းနှင့် nutmeg အတူပိတ်ပစ်မီးလျှံ, ရာသီစေးပျစ်စေပြီးနောက်။
Sautéကြက်သွန်, ဆားနှင့်အတူပြုသောအမှုနောက်ဆုံးရာသီသည်အထိ stuffing နှင့်ကင်ဆမ်း။
အသားတစ်အလွှာလိုက်အဆိုပါတော၌ထားသောခေါက်ဆွဲပန်းကန်ပြန့်ပွားအလွှာ။ အဆိုပါပါဝင်ပစ္စည်းများပြီးဆုံးကြသည်အထိအလွှာ Continue ။
25 မိနစ် "မုန့်ဖုတ်" ကို multivarka အတွက် casserole ပြင်ဆင်နေသည်။
multivarka အတွက်အသားနှင့်အတူဆန် casserole
multivarka ၌ဤဆန် pudding ခြောက်သွေ့တဲ့ kruglozernistoy စီရီရယ်ကနေကိုပြင်ဆင်နှင့်မည်သည့်အသားနှင့်ပြည့်စုံ။ စပ်မုန်ညင်းကထူးခြားတဲ့အရသာနှင့် ostrinku ပန်းကန်ထပ်ထည့်မည်, ဖြည့်ပါလိမ့်မယ်။ ထုတ်ကုန်လေ့ကျင့်ရေးမလိုအပ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ pudding, မခက်ခဲသည်ပြင်ဆင်ပါ။ အချဉ်မုန့်နှင့်အတူပန်းကန်အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်။
ပုံ kruglozernisty - ½ st ။
mince - 200 ဂရမ်;
မုန့် 10% - 50 ml ကို;
ရေ - 100 ml ကို;
မုန်ညင်း - 15 ဂရမ်,
ဇီယာစေ့ - 50 ဂရမ်
မုယောစပါး, ကိုဆေးကြောသည့် mince နှင့်အတူရောထွေး, ကြက်ဥကိုမောင်း, ကောင်းစွာရောမွှေပါ။
ယင်းမုန့်နှင့်ရေကိုလောင်းမုန်ညင်း, ဆား, ငရုတ်ကောင်း, ဒဏ်ငွေ-ဖြတ်ဇီယာစေ့ထားခဲ့ကြသည်
တစ်ဦးအမဲဆီပန်းကန်ထဲသို့အရောအနှောကိုလောင်းနှင့် "မုန့်ဖုတ်" 60 မိနစ် casserole ချက်ပြုတ်။
casserole ကြောင့်ရဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှသောအရာသည်နောက်, တစ်နာရီ၏အခြားလေးပုံတပုံများအတွက် multivarka နေဆဲဖြစ်သည်။
multivarka အတွက် minced အသားနှင့်အတူ casserole
ပိုမိုလွယ်ကူရန်ပြင်ဆင်နေ multivarka အတွက်အသား casserole ။ stuffing စေားပိုပြီး appetizing ဖြစ်လိမ့်မည်ဒါဝက်-အမဲသားသုံးစွဲဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ pre-Marine ပုံးရည်၌ကြက်သွန်နီ, ဒါကြောင့်အစားအစာ၏ပြင်ဆင်မှုလျှော့ချခဲ့သည်။ ဒိန်ခဲပေါ့ပေါ့ browned ကြောင်းပေးထား, သင်ကောင်းစွာအရည်ပျော်မှုတည်းဟူသောဖြစ်စေသုံးနိုင်သည်။
ချဉ်ကြက်သွန်နီ - 1 pc; ။
Mayonnaise - 150 ဂရမ်;
ဒိန်ခဲ - 150 ဂရမ်
အဆိုပါတော၌ထားသောပန်းကန်တဦးတည်း stuffing layer ကိုအိပ်လေ၏။
Mayonnaise နဲ့ဒိန်ခဲ pritrusite သွန်းလောင်း။
50-60 မိနစ် "မုန့်ဖုတ်" ပေါ်တွင်အကွတ်။
multivarka အတွက်မီးဖုတ်ထားသော zucchini
ဟင်းသီးဟင်းရွက် casserole multivarka အတွက် - သင်လျင်မြန်စွာရေခဲသေတ္တာထဲမှာရှိသည်သောထုတ်ကုန်ကနေမုန့်ညက်ပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်သည့်အခါအကောင်းတစ်ဖြေရှင်းချက်။ zucchini ၏ကြားနေအရသာအရှိဆုံးပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်သဟဇာတဖြစ်တယ်, ဒါသင်အခြေစိုက်စခန်းဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အတူစမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကအခြေခံစာရွက်တစ်မွှေးကြက်သွန်ဖြူနဲ့လတ်ဆတ်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏အခန်းကဏ္ဍပါလိမ့်မယ်။
လူငယ်တို့ squash - 500 ဂရမ်;
မုန့် - 100 ဂရမ်;
ကြက်ဥ -3PCs; ။
ကြက်သွန် - 100 ဂရမ်;
ဇီယာစေ့ - 50 ဂရမ်,
peeled zucchini ခြစ်။
ဒိန်ခဲနှင့်ကြက်သွန်ဖြတ်အလတ်စား Cube သို့ pyuriruyte ကြက်သွန်ဖြူနှင့်ထိပ်ပိုင်း parsley ခုတ်။
အားလုံးရောနှော, ဆား, ငရုတ်ကောင်းနှင့်လောကကိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားနှင့်အတူကြက်ဥ, မုန့်ညက်, ရာသီ add, ထိုမုန့်ကိုလောင်း။
multikastryulyu တော၌ထားသော casserole အတွက်, "မုန့်ဖုတ်" က 1 နာရီများအတွက်ချက်ပြုတ်, အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုလောင်း။
အဖုံးကိုဖွင့်ပါနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာမိနစ် 20 ဖုတ်ရမည်။
multivarka အတွက်ဂေါ်ဖီထုပ် casserole
multivarka အတွက်မီးဖုတ်ထားသောပန်းဂေါ်ဖီ - ထိုအန္တရာယ်ရှိသောစားသုံးသူအကြိုးပွုအစားအစာကျွေးမွေးဖို့ကောင်းတစ်ဦးအယူအဆကို။ ငွေရတတ်သောသူအရသာနှင့်နှစ်သက်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်အဘို့မုန့်ညက်ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းဖြည့်စွက်နိုင်ပါသည်။ ဒီစာရွက်အစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ဦးအနည်းငယ်မျှသာအစုံပါရှိသည်ဒါပေမယ့်အစားအစာများကိုဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်အခြားအနိုင် - အသား, ဟင်းသီးဟင်းရွက်သို့မဟုတ်မှို။
ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း inflorescence - 200 ဂရမ်;
ပန်းဂေါ်ဖီ - 200 ဂရမ်;
Syr 150 ဂရမ်;
ကြက်ဥ -2PCs; ။
နှမ်း, စမုန်ဖြူ, ငရုတ်ကောင်းအရောအနှော, ဆား,
မုန့် 10% - 100 ml ကို;
ကြက်ဥ -2PCs ။
ပန်းဂေါ်ဖီနဲ့ဘရိုကိုလီ၏ Inflorescence တဝက်သည်အထိပြုတ်။
ငံပြာရည် Make: နှမ်းမျိုးစေ့များနှင့်လောကကိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွား, နံ့သာပစ်, ကြက်ဥနှင့်အတူမုန့် whisk ။
, ဒိန်ခဲနှင့်အတူဖြန်းအဖုံးကိုပိတ်ပါ, "မုန့်ဖုတ်" mode ကိုသတ်မှတ်။
multivarka အတွက်စိမ်းလန်းစိုပြေ casserole မိနစ် 30 အတွင်းအဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
multivarka အတွက်မှိုနှင့်အတူအာလူး gratin
မီးဖုတ်ထားသောအာလူး multivarka အတွက်မကြာခဏ mashed အာလူးကနေဖန်ဆင်းတော်, သင်မူကားချပ်သို့ပြင်သစ် gratins, ကုန်တယ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ထဲမှာပန်းကန်ကိုလုပ်များနှင့်မုန့်ဒိန်ခဲအဆာထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ မှိုသုံးပြီးအကြိုးပွုအဆာအဖြစ်, ဒါပေမယ့်အချို့ကိုသင်ရိုင်းမှိုရှိပါကလုံခြုံစွာတုတ်။
အာလူး - 5-6 PCs; ။
မုန့် 10% - 100 ml ကို
peeled အာလူးချပ်နှင့် Pat ခွောကျသှေ့သို့ခုတ်ဖြတ်။
Sautéကြက်သွန်, နူးညံ့သောအထိမှိုနှင့် saute ဆမ်း။
မုန့်တစ်ငံပြာရည် Make, ကြက်ဥ, ထက်ဝက်ပြီးလျှင်ဒိန်ခဲ, ဆား, နံ့သာမျိုး။
တော၌ထားသောအာလူး၏အောက်ခြေတွင် Multivarki မှို၏အလွှာပြီးနောက်အလွှာအိပ်လေ၏။ အစားအစာထွက်ပြေးသည်အထိပြန်လုပ်ပါ။
ယင်းမုန့်ငံပြာရည်လောင်း pritrusite ဒိန်ခဲတစ်ဦးအဖုံးတွေနဲ့ဖုံးအုပ်ကို "မုန့်ဖုတ်" mode ကိုဖွင့်။
multivarka အတွက် casserole တစ်နာရီအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
multivarka အတွက်ငါး casserole
သငျသညျမသိလျှင် တစ်ဦး casserole အောင်ဘယ်လို multivarka ငါးအတွက်, ဒီစာရွက်သေချာနေရာလေးကိုအတွက်လာဖြစ်ပါတယ်။ အရသာရှိတဲ့ဟင်းတွေဖြစ်တဲ့ဆော်လမွန်ငါးသို့မဟုတ် chum အဖြစ်, အနီရောင်အသားနှင့်အတူအသေကောင်မှရရှိသောဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ပါဝင်မှု casserole အလိုတော် Self-လုံလောက်သောမပါဘဲ, အာလူးသို့မဟုတ်စီရီရယ် - သင်ကအားရစရာ auxiliary ဖြည့်ပါလို့မရပါဘူး။
ငါး mince - 500 ဂရမ်;
မုန့် - 100 ml ကို;
Rosemary, စမုန်ဖြူ, သံပုရာဖျော်ရည်ကို။
ကြက်ဥ - 1 pc ။
မုန့်, ကြက်ဥ, နံ့သာမျိုး, ဆားတစ်ငံပြာရည်လုပ်ပါ။
အဆိုပါတော၌ထားသော multivarka ပျံ့နှံ့ Minced ဆား, သံပုရာဖျော်ရည်နှင့်အတူဖြန်း။
ပြန့်ပွားတစ်ဝက်ကွင်းကြက်သွန်, ငံပြာရည်, ဒိန်ခဲ pritrusite သွန်းလောင်း။
50 မိနစ် "မုန့်ဖုတ်" ပေါ်တွင်အကွတ်။
multivarka အတွက်မီးဖုတ်ထားသော ravioli
အရသာ casserole အရိုးရှင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်း multivarka ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။ သငျသညျအေးစက်နေတဲ့ဖက်ထုပ်၏သေးငယ်တဲ့ဝတ်ပြုရှိပါကသင်သည်လူကြိုက်များသောအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည့်ပွိုပန်းကန်စေနိုင်သည် မုန့်ဖုတ် "ပျင်းရိဇနီး" ။ 500 ဂရမ် Semi-ချောထုတ်ကုန်, လေးဆယ်မိနစ်, သင်စားသုံးသူများသုံးဘို့အစာစားစေနိုင်သည်။
ဖက်ထုပ် - 500 r4
ကြက်သွန်နီ -2PCs; ။
ဆား, ငရုတ်ကောင်း, နံ့သာ,
Mayonnaise - 100 ဂရမ်
Semirings device ကိုဒုတိယအလွှာတွင်ကြက်သွန်များနှင့်ပြန့်ပွားsauté။
ကြက်ဥ Mayonnaise နှင့်အတူရောထွေးနှင့်ပန်းကန်ကျော်သွန်းလောင်း။
မိနစ် 30 တစ် casserole ပြင်ဆင်ထားရန် "ဖုတ်" ရန်။
Multivarka ၌ပျားရည်ကိတ်မုန့် - ရိုးရှင်းပြီးအရသာချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်စိမ်းလန်းစိုပြေမွှေးကိတ်မုန့်
မည်သို့လျင်မြန်စွာခရိုဝေ့ဖ်ထဲမှာ beets ချက်ပြုတ်ဖို့?
Multivarka အတွက် stewed အာလူး,
ဂေါ်ဖီထုပ် multivarka ၏အိတ်
Multivarka အတွက် meatballs နှင့်အတူဟင်းချို
အောက်ခြေမှာ ruffles နှင့်အတူဝတ်စားဆင်ယင်
Kharcho ဟင်းချို - စာရွက်
Whipworm လူ့ - လက္ခဏာများ, ကုသ
အိမ်နီးချင်းများ Kim Kardashian ကတစ်နည်းနည်းနဲ့လုယက်မှုများ၏အသံများကိုနားမထောင်ခဲ့ဘူး
Internacional လေဆိပ် Juan Manuel Galvez
Schengen ဗီဇာ - အသစ်သောစည်းမျဉ်းများ
ESP - ကရိုးရှင်းတဲ့ဘာသာစကားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလဲ?
အရှေ့တိုင်းကြောင်ဖောက် - ဖောက်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်စောင့်ရှောက်မှု